Sistemụ Formwork, Beam Formwork, Modul Scaffolding System - Sampmax
Na -eche mgbe niile otu esi edozi nsogbu onye ahịa.
Ebe mmalite anyị niile bụ ime ka ihe a bụrụ nkwa zuru oke maka nchekwa, nke bụ isi ihe na -ewu ya.
Ngwa ngwaahịa ihe owuwu niile nke Sampmax bụ nke enyere ikike yana asambodo iji hụ na ndị ahịa nwere obi ike zuru oke maka ịdị mma.
Ihe ọhụrụ na -aga n'ihu na R&D nke ihe ọhụrụ na -enye ndị ahịa ihe ngwọta kachasị echekwa na nke ọma.
N'okpuru ọnọdụ ịhụ na ịdị mma na izute mkpa ndị ahịa, ihe anyị ga -eme bụ inye ndị ahịa ihe ngwọta kachasị mma na nke akụ na ụba.
Sampmax Construction bidoro ihe ọkọnọ ihe eji ewu ụlọ kemgbe 2004. Site na mbido, anyị hiwere maka idobe ihe ụlọ dị mma dị ka ihe nkiri chere ihu na plywood, plywood arịa ụlọ, ihe nrụpụta nchara nchara, ịkpụ osisi.
Ụlọ ọrụ na -ewu ụlọ dị nnọọ mgbagwoju anya. Site na ihe ọhụrụ na -aga n'ihu, sistemụ njikwa ịdị mma siri ike yana atụmatụ ihe na -aga n'ihu, Sampmax na -enye ndị ahịa usoro nhazi na usoro nhazi iji mee ka ọrụ gị dị mma ma baa uru.
Mgbe Ọrụ Ahịa
Ngwaahịa anyị niile bụ nyocha 100% ruru eru. A na -enye iwu pụrụ iche na 1% akụkụ ahụ mapụtara. Mgbe ahịa gachara, anyị ga -esochi ihe onye ahịa na -eme ma na -alaghachi na nzaghachi mgbe niile iji melite usoro ngwaahịa.
Usoro mpempe akwụkwọ na usoro ihe nrụpụta nke anyị na -enye na -eme ka ụlọ ọrụ na -ewu ụlọ rụọ ọrụ nke ọma, dị nchebe na ngwa ngwa. Mgbe anyị na -emezi teknụzụ nrụpụta nke ngwaahịa akụkụ dị ka plywood, ụsọ mmiri na bọọdụ ọrụ aluminom, anyị na -etinyekwa uche na njedebe ikpeazụ na ebe ọrụ, nke na -eduga anyị ilekwasị anya na oge nnyefe ọrụ ebe nrụpụta yana otu ndị ọrụ si dị mfe. ngwaahịa.
Galvanized Q235 Steel Scaffolding steepụ maka ...
Scaffolding Swivel Castor Wheel maka Scaffolding
Scaffolding Swivel Coupler maka owuwu
Scaffolding Self-emechi Safety Gate maka Ladder ...
Na -arịgo formworkNgwọta ScaffoldingNgwọta usoro
Oghere ịrị elu dabara adaba maka isi ụlọ ahụ karịa mita 45, enwere ike itinye ya n'ọrụ isi ụlọ dị iche iche. Ọ na-anabata usoro nchara niile n'ozuzu ya, yana ngwa ọrụ agbakwunyere, obere ihe eji arụ ọrụ na iji ya eme ihe nke ọma, mkpuchi zuru oke, akụrụngwa nchekwa ọkachamara, enweghị ihe ọghọm ọkụ, wdg.
Scaffolding na -ezo aka na nkwado dị iche iche arụnyere na ebe a na -ewu maka ndị ọrụ ka ha rụọ ọrụ ma dozie ụgbọ njem kwụ ọtọ na kwụ ọtọ. Karịsịa maka ndị na -ewu ụlọ ka ha rụọ ọrụ elu na ala ma ọ bụ chekwaa ụgbụ nchekwa dị n'elu ma wụnye ihe ndị dị na elu. E nwere ọtụtụ ụdị scaffolding ...
Sistemụ ihe owuwu ụlọ nke oge a na -awụpụ bụ usoro ihe atụ nwa oge iji hụ na a wụsara ihe ahụ n'ime ihe owuwu dị ka ihe eji achọ ya. Ọ ga -ebu ibu kwụ ọtọ na ibu kwụ ọtọ n'oge a na -ewu ya ...